Abaal-marinnadii la bixiyey maalintii ugu dambeysay horyaalka Premier League 2021/22.. (Salah, Son, Ederson & Alisson oo abaal-marinno helay) – Gool FM
(London) 23 Maajo 2022. Horyaalka Premier League ayaa xalay la soo gabagabeeyey xilli ciyaareedkiisa 2021/22, waxaana ku guuleystay kooxda Manchester City oo hal dhibic kaga qaadday Liverpool.
Haddaba sidii caadada ahayd waxaa la bixiyey abaal-marinnadii la bixin jiray ee gooldhalinta Premier League, kubbad sameeyaha ugu fiican ama xiddiga ugu caawin badan iyo Goolhayaha inta ugu badan shabaqiisa gool ka la ilaashaday horyaalka.
Aynu ku billownee abaal-marinta kabta dahabka ah ee gooldhalinta Premier League waxaa wadaagay ama wada-qeybsaday Son Heung-min iyo Mohamed Salah kaddib markii labada xiddig ay wada dhaliyeen min 23 gool.
Markii ugu horreysay tan iyo fasal ciyaareedkii 2018/19 oo abaal-marinta gooldhalinta Premier League lagu wada guuleysto, sidoo kale Weeraryahanka Tottenham ayaa noqday ciyaaryahankii Asian-ka ahaa ee ugu horreeyey oo ku guuleysta abaal-marintan.
Salah ayaa gool dhaliyey kulankii ugu dambeeyey ee xalay kaddib markii uu beddel ku soo galay kulankii kooxdiisa Liverpool ay 3-1 kaga adkaatay Wolverhampton Wanderers, Son ayaase barbareeyey xiddiga reer Masar kaddib markii uu labo jeer shabaqa soo taabtay kulankii kooxdiisa Tottenham Hotspur ay 5-0 ku xasuuqday Norwich City.
Abaal-marintan ayaa markii ugu horreysay la wadaagay tan iyo xilli ciyaareedkii 2018/19, markaasoo ay Salah, Pierre-Emerick Aubameyang iyo Sadio Mane ay dhammaantood ku wada guuleysteen markii uu horyaalku dhammaaday iyagoo dhaliyey min 22 gool.
Weeraryahanka Liverpool ee Salah ayaa noqday kaliya ciyaaryahankii afaraad ee saddex jeer ku guuleysta kabta dahabka ah ee gooldhalinta horyaalka, kaddib markii xiddigaha lagu daray Premier League Hall of Fame ee kala ah Alan Shearer & Thierry Henry ay sidaas horay u sameeyeen sidoo kale Harry Kane ayaa horay ugu guuleystay saddex mar kabta dahabka ah ee horyaalka.
Son ayaa noqday ciyaaryahankii Asian-ka ahaa ee ugu horreeyey oo ku guuleysta kabta dahabka ah ee gooldhalinta Premier League, sidoo kalena waa xiddigii saddexaad ee ka tirsan Spurs ee qaata abaal-marinta kaddib markii ay horay ugu soo guuleysteen kabta dahabka ah iyagoo ka tirsan Tottenham Teddy Sheringham iyo Kane.
Cristiano Ronaldo ayaa dhankiisa ku dhammaystay kaalinta saddexaad ee kala sarreynta gooldhalinta horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, waxaana uu dhaliyey 18 gool, balse waxa uu dhaawac ku seegay kulankii ugu dambeeyey oo kooxdiisa Man United ay guuldarro 1-0 ah kala kulantay Crystal Palace.
Saddexda xiddig ee ugu goolasha badnaa xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League ayaa kala ah:-
Mohamed Salah 23 gool
Son Heung-min 23 gool
Cristiano Ronaldo 18 gool
Dhinaca kale Mohamed Salah ayaa hantan abaal-marinta kale ee kubbad sameeyaha ugu fiican xilli ciyaareed ee la siiyo xiddiga caawinta ugu badan ka sameeya horyaalka Premier League.
Mohamed Salah ayaa kal ciyaareedkan 2021/22 waxa uu ku guuleystay abaal-marinta kubbad sameeyaha ugu fiicnaa xilli ciyaareedka kaddib markii uu sameeyey 13 caawin, waxaana uu abaal-marintan ku garaacay laacibka ay ka wada tirsan yihiin Kooxda Liverpool ee Trent Alexander Arnold.
Xiddiga xulka qaranka Masar waa laacibkii labaad ee ku wada guuleysta labada abaal-marin ee kabta dahabka ah ee gooldhalinta Premier League iyo laacibka ugu caawinta badan hal xilli ciyaareed, waxaana kaga horreeyey Harry Kane oo sidaas sameeyey kal ciyaareedkii la soo dhaafay.
Harvey Barnes, Jarrod Bowen, Mason Mount iyo Andrew Robertson ayaa ku soo xigay labada xiddig ee kooxda Liverpool, kaalinta saddexaad ayayna ka soo galeen xiddigaha ugu caawinta badnaa xilli ciyaareedkan iyagoo sameeyey min 10 caawin.
Lixda xiddig ee ugu caawinta badnaa xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League ayaa kala ah:-
Mohamed Salah 13 caawin
Trent Alexander-Arnold 12 caawin
Harvey Barnes 10 caawin
Jarrod Bowen 10 caawin
Mason Mount 10 caawin
Andrew Robertson 10 caawin
Dhinaca kale waxaa la bixiyey abaal-marinta gacamo-gashiga dahabka ah ee Premier League, taasoo la siiyo goolhayaha inta ugu badan shabaqiisa gool ka ilaashaday.
Labada Goolhaye ee Alisson iyo Ederson ayaa wadaagay gacmo-gashiga dahabka ah ee Premier League kaddib markii ay tiro isku mid ah shabaqooda gool ka ilaashadeen xilli ciyaareedkan.
Goolhayeyaasha reer Brazil ee kala metela kooxaha Man City iyo Liverpool ayaa ku dhammaystay iyagoo min 20 goor shabaqooda gool ka ilaashaday hroyaalka Premier League.
Kaliya waa markii labaad ee gacmo-gashiga dahabka ee horyaalka lagu wada guuleysto ama la wadaago, kaddib markii ay horay sidaas u sameeyeen goolhayihii Chelsea ee Petr Cech iyo midkii Arsenal ee Wojciech Szczesny fasal ciyaareedkii 2013/14.
Ederson ayaa noqday Goolhayihii saddexaad ee Gacmo-gashiga dahabka ah ee horyaalka Ingiriiska ku guuleysta saddex xilli ciyaareed oo isku xigta, kaddib Pepe Reina (Liverpool) iyo Joe Hart (Man City).